Iphupha lokuthintela Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Akukho namnye kuthi ofuna ukuvalelwa. Uziva unenceba, awunakuzinceda kwaye uphulukene nolawulo. Utshixelwe emhadini omnyama kungekho nokubaleka, umngxuma ofileyo okanye isiqu ezandleni somqweqwedisi, umbono ombi.
Kodwa hayi nje ukuvalelwa ngokwasemzimbeni okanye ukuvalelwa entolongweni kusenza sizive ngaloo ndlela. Ngamanye amaxesha siziva sizivalelekile kwinqanaba lokomoya. Sixhomekeke kwizibophelelo zethu kwaye asikhululekanga kwaphela ukuba sikhethe.
Nabani na ophupha abaleke esakhiweni, engafumani kuphuma ngasemva, kwaye aphendule ephakuzela uya kuvuka ebila. Ukuhlala kwisisele sentolongo kunye nemvakalelo yokuzivalela apha ngamava awoyikisayo kwabaninzi abaphuphayo.
Makhe sijonge ukuba le mvakalelo yengcinezelo kunye nokungakwazi ukwenza isenzo kunokuthetha ntoni kuhlalutyo lwamaphupha:
1 Uphawu "lokuphixa" iphupha - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwe «itshixiwe» iphupha - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha "elivalelweyo" -ukutolikwa kokomoya
Uphawu "lokuphixa" iphupha - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, isimboli yephupha "elifakiweyo" lifuna ukulenza licace kwiphupha elikuyo kuqala el mundo ukuvuka kwi Ingcinezelo ndiziva ndiqhutywa. Nangona kunjalo, oku kuncinci ngenxa yezenzo zangaphandle. Endaweni yoko, ukuphupha kuzibeka phantsi koxinzelelo kwaye kudala iimeko zokuzivalela ngaphakathi ngenxa yokoyika nokungazi kwakho.
Rhoqo, nangona kunjalo, ukutshixelwa kufanekisela okwahlukileyo ephupheni, oko kukuthi, umnqweno wamaphupha Libertad. Iimpembelelo ezingaphandle kwilizwe lokuvuka zingenako ukwenza ukuba lo mnqweno uzaliseke. Ukuphupha uziva ngathi oku kuvaliwe ngengqondo. Kusenokubakho uxanduva olukhulu emagxeni akhe angenakho ukushiya ngasemva, okanye kwezinye iimeko unxibelelwano lwakhe luthintele yena. Ukufumana oyena nobangela, ukulala kwihlabathi elivukayo kufuneka kuthathele ingqalelo iziqu kunye nokujikelezileyo ngokuchanekileyo.
Ukuba iphupha lijonga indlela omnye umntu ayitshixa ngayo ephupheni, oku luphawu lwenkululeko kwaye Izinzuzo kwihlabathi elivukayo. Ukuba uyazi nalo mntu, lo mntu uya kukunceda ebomini bokuvuka. Ngamanye amaxesha uphawu lwephupha "lutshixiwe" ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha likwazisa okulandelayo inhlanhla ngothando okanye njengesibini.
Ukuba umntu utshixiwe kwindawo yokulala xa elele, oku kungabonisa ukuba uzama ukufihla inyani. Kodwa awuyi kuphumelela ekuhambeni kwexesha. Ukuvalelwa esiseleni kunokubangela imvakalelo yokuxinana okanye ukuvalelwa. isithintelo Iingoma.
Uphawu lwe «itshixiwe» iphupha - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwengqondo, uphawu lwephupha lunokuthi "luvalelwe" ukusukela oko Qaphela itolikwe kukucalula kwangaphambili kunye neenkolelo. Kodwa ngenxa yesimboli yephupha, iphupha nalo liyanyanzelwa ukuba liyeke. Ke ngoko, awungekhe ubaleke usebenze into ekufuneka uyenzile ixesha elide.
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kukwachaza ukuvalelwa njengophawu lwephupha ngengqondo yokuba liphupha kuthintelwe engqondweni zive. Awunakho ukukhula ngokukhululekileyo kwaye awuzilawuli izigqibo zakho. Nangona kunjalo, oku kubuyela kwimeko yokungaqondi okuyinyani kobomi. Ukungazi ngoku kulumkisa umphuphi ukuba enze okungakumbi ngophawu "lokuphixwayo" lwephupha eyinyani kwihlabathi elivukayo.
Umqondiso wephupha "elivalelweyo" -ukutolikwa kokomoya
Inqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha litolika uphawu "lokuphixelwa" ephupheni njengesalathiso ephupheni ukuba lixakeke kakhulu ngesiqu salo. Kufanele ukuba intsha Impembelelo musa ukuvala, kodwa hlangana nabo ngovuyo kwaye ngaphandle koloyiko. Ukuba kunyanzelekile, kufuneka ukwenze oku ngoncedo lobuchule.